FORCES DE CHANGEMENT : « Hatsahatra ny fomba fitantanana tsy mahomby ». | Canalnews Madagascar
Home A LA UNE FORCES DE CHANGEMENT : « Hatsahatra ny fomba fitantanana tsy mahomby ».
FORCES DE CHANGEMENT : « Hatsahatra ny fomba fitantanana tsy mahomby ».
By Nirinajuin 03, 2017, 05:15 0
Hitondra fanovana amin’ny fomba fitantanana ny firenena no antom-pisian’ny « Forces de Changement ». Mba tsy hiveranan’ny fomba fanao ratsy nanimba ny firenena dia ny firosoana amin’ny fiaraha-mitantana aloha no vahaolana hitan’ity farany. Hiatrika fifidianana Filoham-pirenena indray ny firenena Malagasy amin’ny taona 2018 ka dieny izao dia mila mandrafitra fifanarahana hifehy an’ireo mpanao politika sy izay hitondra ny firenena mba tsy ho fahantrana foana no holovaina amin’izy ireo.
Fivoriana faharoa izao no efa vitan’ny “Forces de Changement”. Tao anatin’izany ny namaritana ireo toetra ratsin’ireo mpanao politika sy ireo mpitondra firenena izay tsy araka ny teny fampanantenana tamin’ny fampielezan-kevitra akory fa vao nampidi-kizo ny firenena.
Ankoatra izany, ho laharam-pamehana ho an’ny “Forces de Changement” ny fandriam-pahalemana sy ny ady amin’ny kolikoly.
Previous PostHORONANTSARY BENJA KELY 2 ZIOGA: Aseho eny amin’ny RITZ sy REX ny alatsinainy pentekosta. Next PostHOLAFITRY NY MPAHAY MPANDREFY TANY : Hamorona asa ho an’ireo tanora ny fiaraha-miasa amin’ny ESPA.